I-Meicet-Isihlalutyi solusu, isiHlalutyi soMzimba, isiXhobo sobuhle
Wamkelekile Shanghai May Skin
Umthengisi we-Skin Analyzer, i-Body Analyzer, kunye nezixhobo zobuhle.
Yintoni esinokunikela ngayo?
Uphando noPhuhliso, iMveliso, ukuRhweba, kunye noQeqesho.
Zingaphi iindawo zokubala iimveliso zethu ezithunyelwe kumazwe angaphandle?
amazwe angama-55.Ngo-2022 kuya kubakho ngaphezulu.
Kutheni ukhetha i-MEICET?
Iqela leR&D eliTyebileyo elinamava
Ngaphezulu kweenjineli ezingama-20 zinoxanduva lwe-UI, i-Hardware, iSoftware, iAlgorithem kunye noVavanyo lwemisebenzi, ke i-MEICET ye-App oyisebenzisileyo izinzile, ikrelekrele, kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza ngenxa yomthamo owaneleyo.Umgangatho othembekileyo ngenxa ye-100% yokuhlolwa kwe-QC ngaphambi kokunikezelwa.
Ngexesha emva kweNkonzo yoThengiso
Uqeqesho lwasimahla lunokunikezelwa ukuze ufundise indlela yokusebenzisa umatshini.Nayiphi na imiba yemveliso iya kuphendulwa kwiiyure ezingama-24.
Iminyaka eyi-12+ yamava atyebileyo
Amava atyebileyo aqokelelwe ekusebenzeni, ke oomatshini bethu banokumiselwa ukuba bahambelane nemikhwa yokusetyenziswa.
Iqela leeNjineli le-MEICET
Iinjineli ze-AI Algorithm
I-MEICET ine-patent yayo ye-algorithm, i-Skin Cloud Algorithm.Al Self-ukufunda, ukuphuculwa exponential, 9 imizuzwana ukuxilongwa ingcali.
Iinjineli ze-UI ezikwinqanaba eliphezulu
Sibeka ugxininiso olukhulu kuyilo lulonke lwentsebenziswano yabantu nekhompyuter, ingqiqo yokusebenza, kunye nojongano oluhle, ukusebenzisana kwizisombululo ezintsha.
Iqela lethu lihambelana neendlela eziguqukayo zentengiso kwaye liphendula kuphuhliso olutsha lwesoftware.
Imbonakalo yeMveliso yabayili